Indhaha Maxkamadda Ciidamada oo markaan ku sii jeeda Galmudug + digniin | Dhacdo
Home Wararka Maanta Indhaha Maxkamadda Ciidamada oo markaan ku sii jeeda Galmudug + digniin
Indhaha Maxkamadda Ciidamada oo markaan ku sii jeeda Galmudug + digniin
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa Galmudug ka dalbatay in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyay dilalkii Saraakiisha iyo rayidkaba loogu gaystay Gobolka Galgaduud.
9-kii bishii December lix ka mida Saraakiisha Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxaa lagu dilay wadada xiriirisa Degmooyinka Guriceel iyo Balanballe. Weerarkaasi waxaa la sheegay inay gaysteen maleeshiyaad aan si dhaba haybtooda loo aqoonsan.
Arbacadii shalay oo ugu dambeysay weerar kale oo ka dhacay deegaanka Xirsi Lugey oo ku dhow goobtii Saraakiisha lagu laayay ayaa waxaa lagu dilay shan qof oo shacab ahaa, kuwaa oo dilkooda ay gaysteen maleeshiyaad aan la garanayn.
Korneyl Xasan Cali Nuur (Shuute), Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay in arrintaasi ay la xisaabtan ka samayn doonaan, haddii aan markaasi gacanta lagu soo dhigin maleeshiyadii dilalkaasi gaysatay.
Gudoomiyaha ayaa cod kore ku sheegay Saraakiisha Ciidamada ee ku sugan Galmudug inay ka doonayaan in ay gacanta ku soo dhigaan dembiile-yaasha, si sharciga loo horkeeno.
Gudoomiyaha ayaa ku goodiyay haddii aanay taasi dhicin in Maxkamadda Ciidamada ay gayn doonaan deegaanada Galmudug, isla-markaana aanay maxkamaddu bilaa shaqo ahaan doonin.
“Maxkamad ayaan gayn doonnaa deegaanada Galmudug, maxkamadaasna shaqo la’aan ma noqon doonto, haddii la keeni waayo dadkii falalkaasi gaystay. Saraakiishii hawshooda gudan waayay ayaana la horgeynayaa.” Ayuu yiri Shuute oo ka hadlayay Shir-sannadeedka Garsoorka Dalka.
Shuute ayaa yiri “Waxyaabaha socdo ee aan rabno in la qabto waxaa ka mida, waxaan gacanta ku haynaa oo aan diyaarinay anagoo kaashaneyno Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliska Ciidanka Xoogga Dalka xeerkii ama habraacii ay ku shaqayn lahaayen Ciidamada Militariga Booliska ama Polizia Militare, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in ay fuliyaan amarada maxkamaduhu ay soo saaraan, lana xiriira dadka hubeysan ee la soo qaban waayay inay soo qabtaan. Sanadkan waxaan gacanta ku haynaa oo geba-gabo ah habraacyadii ay ku shaqayn lahaayen ciidamadaasi. Ciidamadaas oo aad ogtihiin in muhiimadeeda iyo baahida loo qabo ay muuqato xilligan la jooggo.”
Hadalka Shuute ayaa ku soo aadaya, iyadoo ay soo baxayaan digniino la xiriira suurtagalnimada in dilal kale oo aargoysi ah ay ka dhacaan gobolkaasi.
Dilkii ugu dambeeyay ee shantaasi qof loogu gaystay deegaanka Xirsi Lugey ayaa ka careysiiyay ehelada dadkaasi, kuwaa oo ay suurtagal tahay in ay beegsadaan dadka ku heybta ah maleeshiyada lagu tuhmayo in ay weerarkaasi gaysteen.
Previous articleLafta-gareen iyo Swan oo ka wadahadlay arrimaha doorashooyinka (SAWIRRO)
Next articleShabaab oo la wareegay deegaan u dhaxeeya Dhuusamareeb iyo Guriceel